ထူးခြားဖြစ်စဉ် Archives - Page4of 115 - Myanmar Fire Services Department
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ စိုးကောမင်းရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် လမ်းမတော်(၁)လမ်းထောင့်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခ ....
editor | Sep 3, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၉ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့နယ်၊ စိုးကောမင်းရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် လမ်းမတော်(၁)လမ်းထောင့်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဝင်းအတွင်းရှိ လုံးပတ်(၆) ပေခန့်၊ အမြင့်(၈၀)ပေခန့်ရှိ စိန်ပန်းပင်သည်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သီးသန့်(၂)လမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
၂.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ သီးသန့်(၂)လမ်းတွင် လုံးပတ်(၃)ပေခွဲခန့်၊ အမြင့်(၂၀)ပေခန့်ရှိ ကုက္ကိုပင်သည် မြေပွပြီး အမြစ်မခိုင်သဖြင့် အိမ်ပေါ်သို့ လဲကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း ၁၁ ၂၅...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မြင်းခြံ-မြစ်သား ရေဝန်းကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈/၇)နှင့် (၁၉/၀)ကြားတ� ....
၂.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၂၁ ၁၅ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မြင်းခြံ-မြစ်သား ရေဝန်းကားလမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈/၇)နှင့် (၁၉/၀)ကြား ဆောက်လုပ်ရေးရုံး အနီး ယာဉ်မောင်း ဦးဝင်းမြင့်ဦး မောင်းနှင်သည့် Chenglong အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည် မောင်းနှင်လာစဉ်...
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးဘက်ခြမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈၆/၃)နှင့် (၁၈၆/၄)ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှော� ....
၂.၉.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၀ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးဘက်ခြမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈၆/၃)နှင့် (၁၈၆/၄)ကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ထက်အောင် မောင်းနှင်သည့် Alphard အမျိုးအစား (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်းဘဲ လမ်းယာဘက် မြေသားလမ်းပေါ်တွင်...
Tree fallen beside the entryway of Southwest Regional Military Headquarters, No(11) Quarter, Pathein Township, Ayarwaddy Region
editor | Sep 2, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
1.9.2020 at about 19:45 – A Malaysia Padauk Tree ( in girth of 10 feets and in height 25 feets) fell down due to the heavy rain and strong winds beside the entryway of Southwest Regional Military Headquarters, No(11) Quarter, Pathein Township, Ayarwaddy Region....
Tree fallen at the corner of Yangon-Pyay Road and Tarpon Road, Minquat(3) Quarter, Paungte Township, Bago Region
1.9.2020 at about 15:00 – A Peacock Flower Tree fell down at the milepost of (143/3), the corner of Yangon-Pyay Road and Tarpon Road, Minquat (3) Quarter, Paungte Township, Bago Region. According to the report- 8 Fire Services Personnel of Paungte Township Fire...
Page4of 115« « Previous...23456...102030...Next »
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ ကျိုက်ကာကျေးရွာတွင် ရာဘာခြံမီးလောင်မှုသတင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ တံခွန်တိုင်ဈေးတန်းရပ်၊ ရောင်ခြည်ဦးလမ်းတွင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်မီးလောင� ....
နေပြည်တော်၊ ဒကိ္ခဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၉၃/၄)နှင့်(၁၉၃/၅) အကြားတွင် ယာဉ� ....
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပြည်(အရှေ့)ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မစေတီလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့၊ ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားဈေးလမ်းတွင် ယာဉ်(၁)စီး ရေးမြစ်ထဲသို့ ထိုးကျမှုသတင်း